गरिबको ढाड सेकेर लघुवित्तले कमाए अस्वाभाविक नाफा, नाडेपको नाफा ८ हजार प्रतिशतले बढ्यो « Clickmandu
गरिबको ढाड सेकेर लघुवित्तले कमाए अस्वाभाविक नाफा, नाडेपको नाफा ८ हजार प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्त संस्थाहरुको खुद नाफा अस्वाभिकरुपमामा बढेको छ । कोष लागत घट्दा पनि स्पेडमा चलाखी गर्दा लघुवित्त वित्त संस्थाले खुद नाफा बढाएका हुन् ।
हाल ७० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तर, हालसम्म ५० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामात्र सार्वजनिक निष्काशनमार्फत् सेयर बजारमा आएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सुचीकृत छन् ।
समाज लघुवित्त संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनमार्फत् सर्वसाधारणमा गएपनि मर्जरको प्रक्रियामा भएको हुँदा यसको कारोबार दोस्रो बजारमा भएको छैन ।
नेप्सेमा सुचिकृत ५० लघुवित्त संस्थाको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ सय ४१.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवको यी संस्थाहरुले ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । जसमा ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप गरी गत आवमा ११ अर्ब ८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन वित्तीय संस्थाहरु सफल भएका छन् ।
यसबीचमा वित्तीय संस्थाहरुले १.२९ प्रतिशतदेखि ८ हजार १ सय ५२.६३ गुणासम्मले खुद नाफा बढाएका छन् । तर, आरएमडीसी लघुवित्त र ग्रामिण विकास लघुवित्तको खुद नाफा भने क्रमशः १८.६७ प्रतिशत र ७ सय ७३.४१ प्रतिशतले खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा घटेको छ ।
के हो कोष लागत ?
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको स्रोत नै आफ्ना सदस्यहरुसँग सापटी तथा बचत र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिने कर्जा हो । यसबाटै वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा सापटी दिन्छन् । स्रोतमा लाग्ने खर्चलाई नै कोष लागत भनिन्छ । अर्थात् बचतकर्ता तथा निक्षेपकर्ता र बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई दिइने ब्याजदर नै वित्तीय संस्थाको कोष लागत हो ।
कोष लागत घट्दा पनि यसरी बढ्यो खुद नाफा
कोरोना कहरमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो लागत नबढाएरै भएपनि खुद नाफा अस्वाभिक रुपमा बढाएका हुन् । कोष लागत घट्दा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकता ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा नै कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद नाफा बढेको हो । यद्यपि राष्ट्र बैंकले सो अघिसम्म कायम लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १८ प्रतिशतको ब्याजदर क्यापलाई १५ प्रतिशतमा अघिल्लो आवमा सीमित गरेको थियो ।
यसरी, आफूले लिन पाउने ब्याजदरको सीमा घट्दा पनि वित्तीय संस्थाहरुको कोष लागत घट्दा खुद नाफा समेत बढको छ ।
गत असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको औषत कोष लागत ६.४२ प्रतिशत छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३.०४ प्रतिशत बिन्दु कम हो । अघिल्लो आवमा लघुवित्त संस्थाहरुको कोष लागत ९.४६ प्रतिशत थियो ।
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सबै लघु वित्त संस्थाको कोष लागत घटेको छ । सो अवधिमा १.०१ देखि ५.२६ प्रतिशत बिन्दुसम्मले कोष लागत घटेको छ ।
तर, सो अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले खुद ब्याज आम्दानी भने ४९.३४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा १६ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका थिए । जुन गत आवमा आइपुग्दा ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बढेर २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले आधारदर भन्दा कम दरमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो । सो अघिसम्म विपन्न वर्गको कर्जा समेत बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् प्रवाह गर्न बेसरेटभन्दा तल गएर ३/४ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा दिन्थे ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन १२ गते निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशन अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीले बेसरेटभन्दा तल लघुवित्त संस्थालाई कर्जा प्रवाह गरेका भएमा १ वर्षभित्रमा सीमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्देशन जारी हुन अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रणालीमा लगानी योग्य रकम प्रसस्त हुँदा लघुवित्त संस्थालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रावाह गरेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बताए । जसकारणले गर्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाएर राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदर क्यापमा सापटी दिँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कोष लागत घटेको उनको भनाइ छ ।
गत आवको बैशाख, जेठ र असार २ सय अर्ब रुपैयाँ बढी बैकिङ प्रणालीमा तरलता थियो । त्यसलाई सेटल गर्न बैंक तथा वित्त संस्थाले आफ्नो तोकिएको विपन्न वर्ग कर्जा पुग्ने गरी सस्तो ब्याजदरमा बेसरेटभन्दा तल गएरै कर्जा दिएका थिए ।
‘संस्थामा पैसा बस्नुभन्दा थोरै भएपनि ब्याज आउँछ भनेर ४/५ प्रतिशत ब्याजदर मै लघुवित्त लाई कर्जा दिएका हुन सक्छन्,’ प्रवक्ता ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जुन रकम लघुवित्त संस्थाले गत आवको असार मसान्तसम्म उपयोग गर्न पाएका थिए ।’
यसरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएर ऋणीलाई १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा दिँदा नाफा बढ्न गएको ढकालको भनाइ छ ।
तर, लघुवित्त वित्तीय संस्था संघ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भने बैंक तथा वित्त कम्पनीले घटाउको ब्याजदर अस्थिर भएको हुँदा आफ्ना ऋणीलाई बयाजदर घटाउन नसकिएको अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए ।
‘गत आवमा केही समय हामीले ५ प्रतिशतसम्म बैंकहरुबाट कर्जा पाएका थियौ,’ अध्यक्ष लम्सालले क्लिमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरुले कहिले ब्याजदर बढाउने टुङ्गो थिएन, त्यसैले हामीले लिने ब्याजदर घटाउन नसकेको हौँ ।’
गत आवमा बैंकहरुबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिएर राष्ट्र बैंकले तोको ब्याजदर क्यापसम्मको कर्जा लगानी गर्दा कोष लागत घट्न गई खुद नाफा बढेको उनको भनाइ छ ।
‘यस्तो नाफा पनि स्थिर छैन्, बैंकहरुले हामीलाई पनि बेसरेटमा प्रिमियम जोडेर नै कर्जा दिन थालेका छन्,’ उनले थपे, ‘त्यसैले यो वर्ष सबै संस्थाहरुको कोष लागत बढ्नुका साथै आगामी वर्ष अहिलेको तुलनामा खुद नाफा पनि धेरै घट्छ ।’
पछिल्लो समय केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय पहुँच विस्तारमा भन्दा नाफ उन्मुख हुँदै गएको हुँदा केही लघुवित्तहरुको नाफा अस्वाभिकरुपमा बढेको उनको भनाइ छ ।
यसरी, बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा दिएपनि लघुवित्तले भने १० प्रतिशतसम्म स्प्रेड राखेर कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा ग्रामिण भेगका जनतालाई सस्तो तथा सहुलियतमा वित्तीय सेवा दिने उदेश्यका लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरु उदेश्य विपरीत नाफा उन्मुख हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
कुनको अवस्था कस्तो ?
खुद नाफाः नेप्सेमा सुचिकृत ५० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ४८ वटा संस्थाको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १.२९ प्रतिशतदेखि ८ हजार १ सय ५२.६३ प्रतिशतसम्मले बढेको छ । जसमा ३ वटा संस्थाको १ हजार प्रतिशत बढी, १० वटा संस्थाको ३ सय प्रतिशतदेखि ८ सय प्रतिशतसम्म, २८ वटा कम्पनीको १ सय प्रतिशतदेखि ३ सय प्रतिशतसम्म र ७ वटा कम्पनीको ९९ प्रतिशत तल खुद नाफा वृद्धि भएको छ ।
तर, आरएमडीसीको १८.६७ प्रतिशत र ग्रामिण लघुवित्तको ७ सय ७३.४१ प्रतिशतले अघिल्लो आवको तुलनामा खुद नाफा गत आवमा घटेको छ ।
अघिल्लो आवको तुलनामा खुद नाफा बढ्नेमा सबैभन्दा बढी नाडेप लघुवित्तको र सबैभन्दा थोरै फष्ट माइक्रोफाइनान्सको बढेको हो ।
लघुवित्त संस्थाहरुले गत आवमा लघुवित्त कम्पनीहरुले ७८ लाख रुपैयाँदेखि १ अर्ब २१ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये छिमेक लघुवित्तले सबैभन्दा धेरै र नेपाल सेवा लघुवित्तले सबैभन्दा थोरै खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् ।
तर, सो अवधिमा घोडाघोडी लघुवित्तको खुद नाफा भने सो अवधिमा १८ लाख रुपैयाँ नकारात्मक छ । सो संस्था मर्जरमा गएको कारणले गत आवको तेस्रो त्रैमासमै कारोबार रोक्का भएको थियो ।
यस बाहेका ७ वटा लघुवित्तले ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म, १२ वटा संस्थाले १५ करोडदेखि ४५ करोड रुपैयाँसम्म, १२ वटा संस्थाले १० करोडदेखि १५ करोडसम्म र १६ वटाले १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खुद नाफा आर्जन गरेका छन् ।
कोष लागतः अघिल्लो आवमा लघुवित्त संस्थाहरुको औषत कोष लागत ९.४६ प्रतिशत थियो । जुन गत आवको असार मसान्तसम्म ३.०४ प्रतिशतले घटेर ६.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सो अवधिमा ८ वटा संस्थाको कोष लागत २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा कम, १६ वटा संस्थाको २ देखि ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म, १७ वटाको २ देखि ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म र ९ वटा संस्थाको ४ देखि ६ प्रतिशत बिन्दुसम्मले कोष लागत घटेको छ ।
यस्तै, गत आवमा लघुवित्त संस्थाहरुको कोष लागत ३.०८ प्रतिशतदेखि ८.९२ प्रतिशतसम्म छ । जसमा सबैभन्दा बढी घोडाघोडी लघुवित्तको र सबैभन्दा थोरै साना किसान लघुवित्तको छ ।
यस बाहेक १० वटा संस्थाको कोष लागत ६ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म, २७ वटा कम्पनीको ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म र १२ वटा संस्थाको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
खुद ब्याज आम्दानीः गत आवमा ५० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २४ अर्ब ९० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ४९.३४ प्रतितश अर्थात् ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
सो अवधिमा आरएमडीसीको १२.२५ प्रतिशत र घोडाघोडी लघुवित्तको १३.९९ प्रतिशत खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ भने, यसबाहेक सबै संस्थाको ९.०२ प्रतितशदेखि ३१३.५१ प्रतिशतसम्मले खुद ब्याज आम्दानी बढेको छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी किसान लघुवित्तको र सबैभन्दा कम साना किसान लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बढेको छ ।
यस बाहेक ७ वटा संस्थाको १ सय प्रतिशतमाथि, १९ वटा संस्थाको ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म र २१ वटाको ५० प्रतिशतभन्दा कमले खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बढेको छ ।
यस्तै, गत आवमा १ करोड २३ लाख रुपैयाँदेखि २ अर्ब १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँसम्म खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थन र सबैभन्दा थोरै घोडाघोडी लघुवित्तको रहेको छ ।
यसबाहेक ८ वटा संस्थाले १ अर्ब देखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म, १० वटाले ४० करोडदेखि ९० करोड रुपैयाँसम्म, २४ वटा संस्थाले १० करोड रुपैयाँदेखि ४० करोड रुपैयाँसम्म र ७ वटा संस्थाले ९ करोड रुपैयाँभन्दा कम गत आवमा खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् ।